हामी कसरी गैर-विश्वासीहरूलाई भेट्छौं? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
मैले तपाईंलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्बोधन गरेको छु: गैर-विश्वासीहरूको बारेमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ कि यो एक प्रश्न हो जुन हामी सबैले सोच्नु पर्छ! संयुक्त राज्य अमेरिकाको जेल फेलोशिप र ब्रेकपोइन्ट रेडियो कार्यक्रमका संस्थापक, चक कोल्सनले एक पटक यस प्रश्नको जवाफ दिए: “यदि अन्धा मान्छेले तपाईंको खुट्टामा पैदल हिर्काउँदछ वा तपाईंको शर्टमा तातो कफी राख्छ भने, के तपाईं उहाँसँग रिसाउनुहुनेछ? ऊ आफैंले जवाफ दियो कि हामी सायद त्यस्तो हुँदैनौं किनकि अन्धा मान्छेले उसको अगाडि के देख्न सक्दैन।
कृपया यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि ती मानिसहरू जसलाई अहिलेसम्म ख्रीष्टमा विश्वास गर्न बोलाइएको छैन उनीहरूले उनीहरूको आँखाको अगाडि सत्यता देख्न सक्दैनन्। पतनको कारण, तिनीहरू आध्यात्मिक रूपमा अन्धा छन् (१ कोरिन्थी १२: -2-।) तर ठीक समयमा पवित्र आत्माले तिनीहरूका आध्यात्मिक आँखा खोलिदिनुभयो ताकि तिनीहरूले देख्न सकून् (एफिसी २:१:1,18)। चर्च फादरहरूले यस घटनालाई ज्ञानको चमत्कार भने। यदि यो भयो भने, मानिसहरूले विश्वास गर्न सम्भव थियो; उनीहरूले आफ्नै आँखाले देखेका कुरामा विश्वास गर्न सक्थे।
जब येशूले पृथ्वीमा आफ्नो सेवकाईको थालनी गर्नुभयो, त्यहाँ कुनै मसीहीहरू थिएनन् - प्रायः मानिसहरू गैर-विश्वासीहरू थिए, त्यतिखेरका यहूदीहरू पनि। तर धन्यबाद, येशू पापीहरूको साथी हुनुहुन्थ्यो - अविश्वासीहरूको पक्षमा बोल्ने। यो उसलाई स्पष्ट थियो कि "स्वस्थहरूलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्दैन, बिरामीहरू" (मत्ती 9,12।।) हराएको पापीहरू खोज्नको लागि येशू आफैंलाई प्रतिबद्ध गर्नुभयो ताकि तिनीहरू उहाँ र उनीहरूले प्रदान गरेको मुक्तिलाई स्वीकार्न सकून्। उसले आफ्नो समयको एक धेरै भाग मानिसहरूसँग बिताए जसलाई अन्य व्यक्तिहरू अयोग्य र अप्रत्याशनीय ठान्छन्। यसैले यहूदी धर्मगुरुहरूले येशूलाई "ब्वाँसो र मद्यपान गर्ने, कर उठाउने र पापीहरूको साथी" भनेर अंकित गरे (लूका १:१:7,34)।
सुसमाचारले हामीलाई सत्य प्रकट गर्दछ; येशू, परमेश्वरका पुत्र, एक मानिस बन्नुभयो जो हाम्रो माझमा बास गर्नुभयो, मरे र उक्लनुभयो; उसले यो सबै मानिसहरूको लागि गर्‍यो। धर्मशास्त्रले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर "संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।" (यूहन्ना :3,16:१) यसको मतलब केवल यो हुन सक्छ कि अधिकांश व्यक्तिहरू अविश्वासी छन्। एकै परमेश्वरले हामीलाई येशू जस्तै विश्वासीहरू सबै मानिसहरूलाई माया गर्न बोलाउनुहुन्छ। यसका लागि हामीले उनीहरूलाई ईसाईको रूपमा अवलोकन गर्न अन्तरदृष्टि आवश्यक छ - जसले उहाँमा विश्वास गरेकै छैन - उहाँकै हुन् जसका निम्ति येशू मर्नुभयो र बौरे। दुर्भाग्यवस, धेरै इसाईहरूका लागि यो धेरै गाह्रो छ। स्पष्ट रूपमा त्यहाँ अरुलाई न्याय गर्न पर्याप्त इसाईहरु तयार छन्। तथापि, परमेश्वरको पुत्रले घोषणा गर्नुभयो कि उहाँ संसारको निन्दा गर्न होइन, तर बचाउन आउनुभएको हो (यूहन्ना १:3,17:१) दुःखको कुरा, केही इसाईहरू अविश्वासीहरूको न्याय गर्न यत्तिको उत्सुक छन् कि उनीहरूले भगवान पिताले उनीहरूलाई कसरी हेर्छन् - आफ्ना प्रिय सन्तानहरू जस्तो उनीहरूले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दछन्। यी व्यक्तिहरूको लागि, उसले आफ्नो छोरालाई तिनीहरूका निम्ति मर्न पठाउँनुभयो, यद्यपि तिनीहरू उहाँकै थिए (अझै) चिन्न वा प्रेम गर्न सकेन। हामी उनीहरूलाई अविश्वासीको रूपमा देख्न सक्छौं, तर भविष्यमा उनीहरूलाई विश्वास गर्नेहरू जस्तो देख्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले अविश्वासीको आँखा खोलिदिनु अघि, तिनीहरू अविश्वासको अन्धाले बन्द हुन्छन् - परमेश्वरको पहिचान र प्रेमको बारेमा ईश्वरशास्त्रीय गलत अवधारणाहरूले भ्रमित गर्दछ। यो यी शर्तहरूमा ठीक छ जुन हामीले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नु पर्ने हो उनीहरूलाई त्याग्न वा अस्वीकार गर्नुको सट्टा। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ कि जब पवित्र आत्माले उनीहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ, तिनीहरूले परमेश्वरको मेलमिलापको अनुग्रहको शुभ समाचार बुझ्नेछन् र विश्वासका साथ सत्यलाई स्वीकार्नेछन्। यी व्यक्तिहरू नयाँ जीवनमा परमेश्वरको निर्देशन र नियम अन्तर्गत प्रवेश गर्न सक्दछन् र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तानको रूपमा प्रदान गरिएको शान्ति अनुभव गर्न सक्षम गर्न सक्दछ।
जब हामी गैर-विश्वासीहरूको बारेमा सोच्दछौं, येशूको यो आज्ञालाई सम्झनुहोस्: "आपसमा प्रेम गर", उनले भने "म कसरी तिमीलाई माया गर्छु"। (यूहन्ना १:15,12:१) अनि येशूले हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ? हामीलाई उसको जीवन र प्रेममा बाँड्न दिएर। गैर-विश्वासीहरूबाट विश्वासीहरूलाई अलग गर्न उसले पर्खाल निर्माण गर्दैन। सुसमाचारका पुस्तकहरूले हामीलाई भन्दछ कि येशू कर उठाउनेहरू, व्यभिचारीहरू, मान्छेहरू र कुष्ठरोगीहरूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो र स्वीकार्नुहुन्थ्यो। उनले नराम्रो प्रतिष्ठा, महिलाहरू जसले उनलाई खिसी गरे र पिटे, अनि क्रूसमा टाँगिएका अपराधीहरूलाई पनि मन पराउँथे। जब येशू क्रूसमा झुण्डिरहनुभयो र यी सबैको बारेमा सोच्नुभयो, तब उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो: «हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्; किनकि उनीहरू जान्दैनन् कि उनीहरू के गर्दैछन्! » (लूका १:१:23,34)। येशू सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र ग्रहण गर्नुहुन्छ जसले गर्दा तिनीहरू सबैले उनीहरूको मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा क्षमा पाउन सक्छन् र पवित्र आत्माबाट स्वर्गमा बस्नुहुने आफ्ना पितासँग मिल्दछन्।
हामी कसरी गैर-विश्वासीहरूलाई भेट्छौं?